पुरुषले कसरी जन्माउन सक्छन् बच्चा ? - IAUA
पुरुषले कसरी जन्माउन सक्छन् बच्चा ?
ramkrishna November 29, 2016	पुरुषले कसरी जन्माउन सक्छन् बच्चा ?
आमा बन्ने शौभाग्य केवल महिलाहरुले मात्र पाउँछन् । अहिलेसम्म सबैले जान्दै आएको र भोग्दै आएको कुरा यहीँ नै थियो । तर चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा भएको प्रगतिले यो यथार्थलाई बदलिदिएको छ र पुरुषहरु समेत अब गर्भवती भएर बच्चा जन्माउन सक्ने अर्थात् पुरुष आमा बन्न सक्ने भएका छन् ।
अमेरिकाका एक पुरुषले त तिन तिन जना बच्चा जन्माएर यो सावित गरिदिएका छन् । समलिंगी रहेका थोमस बेटी नामका ती व्यक्तिले अहिलेसम्म ३ वटा बच्चा जन्माइसकेका छन् । उनले सबैभन्दा पहिले सन् २००७ मा लिंग परिवर्तन गरी बच्चा जन्माएका थिए ।
त्यस्तै अमेरिका तथा अस्ट्रे लियामा समेत केही समलिंगी पुरुषहरुले बच्चा जन्माइसकेका छन् । सन् २०१३-१४ मा पश्चिमी अस्ट्रेलियामा मात्रै २२ जना पुरुषले बच्चा जन्माएका र न्यु साउथवेल्समा १६ जना पुरुषले बच्चा जन्माएका तथ्यांक छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार समलिंगी पुरुषहरु जसको सरीरमा महिलाको प्रजनन अंग हुन्छ उनीहरु सजिलैसँग बच्चा जन्माउन सक्दछन् । अर्थात लिंग परिवर्तनपछि पुरुषहरुले पनि बच्चा जन्माउन सक्दछन् ।
आफूले ३ बच्चा जन्माएका थोमसले आफुजस्तै अरु समलिंगी पुरुषहरुलाई पनि बच्चा जन्माउन उत्प्रेरित गरिरहेका छन् ।
Previous Previous post: डाक्टरका कुरा : ८५ प्रतिशत रोगका कारण क्रोध
Next Next post: तपाईंलाई समूहमा बस्न वा बोल्न डर लाग्छ ? मानसिक समस्या हुनसक्छ